Deg Deg.Daawo Golaha wakiilada oo cod gantaaga ku Ansixiyay Wadahadalada dowlada Somaliland iyo mamulka KHaatumo. – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Golaha Wakiiladda Somaliland ayaa fadhigii maanta oo uu shir gudoominaayey guddoomiye ku-xigeenka Golaha Wakiiladda Somaliland md. Baashe Maxamuud Faarax ayaa cod u qaaday wadda haddaladda ay xukuumadda Somaliland la bilowday maamulka khaatumo.
Golaha ayaa cod aqalabiyadd ah ku meel mariyey inay sharci yihiin, wadda hadaladda Somaliland iyo maamulka khaatumo.
Halkan ka daawo ansixinta golaha wakiiladda Somaliland ee Wadda hadaladda Somaliland iyo Khaatumo: